DIB U MILICSI : Maxay ku heshiiyeen Galmudug iyo Ahlu sunna? - BBC News Somali
DIB U MILICSI : Maxay ku heshiiyeen Galmudug iyo Ahlu sunna?
Image caption Madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu saxiixay heshiiska
Khilaafka Ahlu Sunna iyo maamulka Galmudug ayaa soo jiitamayay muddo, wuxuuna maamulka Galmudg dhismay ayadoo Ahlu sunna ay diidan tahay.
Balse dhex dhexaadin ay sameeyeen dowladda federaalka Soomaaliya, urur goboleedka IGAD iyo dowladda Jabuuti ayaa lagu gaaray heshiis ka koobnaa in ka badan 10 qodob.
Waxyaabaha lagu heshiiyay waxaa ka mid ah in maamulka hadda jira ee Galmudug uu sidiisa sii ahaado, balse lagu daro xil cusub oo ah gudoomiyaha golaha wasiirada. Xilkaas waxaa qabanaya madaxa Ahlu Sunna, Sheekh Maxamed Shaakir.
Xilka ayaa ah mid ku cusub saaxadda siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan midda maamul goboleedyada. Awoodaha uu yeelanayo qofka qabanaya xilka cusub waxaa ka mid ah:
In marka la magacaabo golaha wasiirada iyo wasiirro dowlayaasha uu hor geeyo baarlamaanka maamulka
In uu guddoomiyo shirka golaha wasiirada Galmudug
In mar walba uu la tashado madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa
Balse marka ay timaado xil ka qaadista golaha wasiirada waxaa awood u leh madaxweynaha Galmudug isagoo la tashanaya madaxa golaha wasiirada oo ah xilka cusub ee la soo kordhiyay, sida ku xusan heshiiska ay wada saxiixdeen Galmudug iyo Ahlu Sunna.
Sidoo kale waxaa heshiis laga gaaray arrimo ay ka mid yihiin isku daridda labada baarlamaan, "ayadoo la raacayo hannaanka awood qeybsiga beelaha" ku saleysan ee Soomaaliya.
Image caption Qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada ayaa ku sugnaa goobta lagu saxiixay heshiiska
Sidoo kale Ahlu Sunna waxaa loo ogolaaday in ay qaadato xilka gudoomiyaha maxkamadda sare ee Galmudug, "ayaga ayaana awood u leh in ay soo magacawdaan", sida la xusay.
Wada hadallada heshiiskan lagu gaaray ayaa soo socday muddo, waxayna bilowdeen ka dib markii Xaaf loo doortay madaxweynaha Galmudug. Horay waxaa u jiray iskudayo badan oo fashilmay oo la doonayay in labada dhinac la isugu keeno.
Ahlu Sunna ayaa moddo dooneysay in ay qeyb muuqata ku yeelato maamulka Galmudug, waana sababtaa midda keentay in ay ka baaqato dhismihii maamulka oo la unkay xilli uu jiray khilaaf adag.
Sidoo kale waxaa horay u dhacay dagaallo dhexmaray labada dhinac oo sababay dhimasho iyo dhaawac. Balse hadda Ahlu Sunna waxay qeyb muhiim ah ku yeelaneysaa dhanka ciidamada Galmudug oo si siman loo qeybsan doono, sida ku xusan qodobka toddobaad heshiiska.
Arrinta dastuur loo dhan yahay oo uu yeesho maamulka ayaa la sheegay in loo saari doono guddi farsamo oo ka shaqeeya isuna keena labada dastuur ee hadda u kala yaalla Galmudug iyo Ahlu sunna.
Image caption Hoggaamiyayaal ka socday beesha caalamka ayaa sidoo kale goob joog u ahaa saxiixa heshiiska
Qeybaha Ahlu Sunna ay maamusho ee ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa "laga yeelan doonaa kullan gaar ah" sida ku qoran heshiiska. Hiiraan waxay hadda ka mid tahay maamulka Hirshabelle, laakiin heshiiskan maanta Muqdisho lagu saxiixay kuma cadda dhanka ay raacayaan deegaanada Ahlu Sunna ay maamusho.
Magaalada Dhuusamareeb oo la filayay in ay xarun u noqoto maamulka Galmudug waxaa horay u diiday Ahlu Sunna Waljamaaca oo maamusho halkaasi, taas oo sababtay in Galmudug ay xarun ku meel gaar ah ay ka dhigto degmada Cadaado.
Hadda waxay muuqato in heshiis laga gaaray arrinta Dhaasamareeb, in kastoo si waadax ah aan loogu xusin is afgaradka Muqdisho lagu saxiixay.
"Heshiiska waxaa lagu dhameystiri doonaa magaala madaxda maamulka cusub ee Dhuusamareeb", ayaa lagu soo geba gebeeyay qoraalka ka soo baxay labada dhinac oo sidoo kale loogu mahadceliyay dhinacyada ka qeybgalay in la dhammeeyo khilaafka muddada u dhexeeyay Ahlu Sunna iyo Galmudug.
Maqal Maxay ku heshiiyeen Galmudug iyo Puntland?
Maqal Ahlu Sunna oo ka hadashay madaxweynaha cusub ee Galmudug
Maqal Xaaf oo beeniyay in baarlamaanka Galmudug uu xilka ka qaaday
Maqal Xaaf oo beeniyay in xilka laga xayuubiyay